Buildinglọ Azụmaahịa - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Commercial ingslọ HVAC Ngwọta
N'ime ụlọ ọrụ azụmaahịa, ikpo ọkụ na jụrụ jụrụ nke ọma abụghị naanị isi ihe na -emepụta ndị ọrụ na gburugburu ebe ndị enyi na-eme enyi, kamakwa iji mee ka ụgwọ ọrụ rụọ ọrụ. Ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, ọfịs, nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ azụmaahịa ọhaneze ọ bụla dị mkpa iji hụ na oke nkesa ma ọ bụ nkesa dị jụụ, yana idobe ikuku dị mma. Airwoods ghọtara mkpa ụlọ azụmahịa ma nwee ike ịhazi ngwọta HVAC maka usoro, nha ma ọ bụ mmefu ọ bụla.
HVAC chọrọ maka Forlọ Azụmaahịa
Enwere ike ịchọta ụlọ ọrụ Office na ụlọ ahịa na ụlọ nha na ụdị nha, nke ọ bụla nwere nsogbu nke aka ya ma a bịa n'ihe nhazi na ntinye HVAC. Ebumnuche bụ isi maka ọtụtụ ụlọ ahịa na-ere ahịa bụ ịhazi na idobe ọnọdụ dị mma maka ndị ahịa na-abata n'ụlọ ahịa ahụ, oghere mkpọsa nke dị oke ọkụ ma ọ bụ oke oyi nwere ike iwesa ihe mgbasasị maka ndị na-azụ ahịa. Banyere ụlọ ụlọ ọrụ, nha, nhazi, ọnụ ọgụgụ nke ọfịs / ndị ọrụ, yana ọbụlagodi afọ ụlọ ahụ kwesịrị itule. Igwe ikuku n'ime ụlọ bụkwa ihe dị mkpa iji tụlee. Nhicha nke ọma na ventilashion dị mkpa maka igbochi isi na ichebe ahụike iku ume nke ndị ahịa na ndị ọrụ. Spacesfọdụ oghere azụmahịa nwere ike ịchọ usoro iwu 24-7 dị na ụlọ ọrụ niile iji chekwaa ike eji eme ihe mgbe oge anaghị ebe.
Anyị na-enye sistemụ HVAC ohuru, arụ ọrụ nke ọma, nke a pụrụ ịdabere na ya iji zute ogo ikuku dị n'ime ụlọ. Ọzọkwa mgbanwe, na ọkwa ụda dị ala achọrọ maka ụlọ ọrụ ọfịs na ebe ndị na-ere ahịa, ebe nkasi obi na nrụpụta bụ ihe kacha mkpa. Maka imepụta usoro HVAC, anyị na-eburu n'uche ihe ndị dị ka oke oghere, akụrụngwa / akụrụngwa ugbu a, yana ọnụ ọgụgụ ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ga-ahazi n'otu n'otu. Anyị ga-enyocha ihe ngwọta nke emebere iji nye arụmọrụ kachasị ma na-eme ka ọnụ ahịa oriri na-akwụ ụgwọ. Anyị nwekwara ike ịrụ ọrụ na ndị ahịa anyị iji nyere ha aka iru ụkpụrụ ụlọ ikuku dị mma. Ọ bụrụ na ndị ahịa na-ahọrọ ikpo ọkụ ma ọ bụ dị jụụ ohere naanị n'oge awa azụmahịa, anyị nwere ike ịchekwa gị ego na ụgwọ ike gị site na ịnye usoro nchịkwa mara mma iji nyere gị aka ịmepụta usoro kpo oku na ikpo ọkụ maka ụlọ ọrụ gị, ọbụlagodi na-echekwa ọnọdụ dị iche iche maka ụlọ dị iche iche.
Abịa HVAC maka ndị ahịa azụmaahịa anyị, enweghị ọrụ buru oke ibu, pere mpe ma ọ bụ gbagwojuru anya. N'ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe, Airwoods wuru aha ya dị ka onye ndu ụlọ ọrụ n'inye azịza HVAC ahaziri maka ọtụtụ azụmaahịa.
Reslọ oriri na ọ Resụ Dubaiụ Dubai DX Coil AHU
Mongolia Conference Center ikuku njikwa Unit